प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री आचार्य की राई ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री आचार्य की राई ?
‘प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि पदीय हिसावले पनि म नै हुन्छु’ भीम आचार्य
‘प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्री म नै हुँ म त्यो पदका लागि सक्षम छु’ शेरधन राई
शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आचार्यले आफू मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेको घोषणा गरेको भोलिपल्टै आइतबार विराटनगरमा राईले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्य मन्त्रीको रुपमा आफू योग्य रहेको दाबी गरे ।
आचार्य र राईले प्रदेश एकको मुख्यमन्त्रीका लागि दावी फरक–फरक ठाउँबाट मुख्यमन्त्रीको एकै दावी गरिरहेका थिए । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमाले सचिव आचार्य र पोलिटव्यूरो सदस्य राईको चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । चुनावअघि नै मुख्यमन्त्रीको एजेण्डासहित भोट माग्न गएका दुवै नेता अहिले पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो पक्षमा पार्नेगरि लागिपरेका छन् ।
अध्यक्ष केपी ओलीनिकट राई र माधव नेपाल समूहका आचार्य दुवैले मुख्यमन्त्री आफैँ बन्ने दावी गरिरहेका छन् । एमाले स्थायी समितिको मंगलबारको निर्णयले मुख्यमन्त्री बन्ने अधिकार तल्लो कमिटीलाई दिएको छ । आन्तरिक चुनावबाट मुख्यमन्त्री छान्ने निर्णय भएपछि केन्द्रको शक्ति अब तल्लो तहमा लगाउने पर्ने देखिएको छ । भीम आचार्य, सुनसरीबाट र राई भोजपुरबाट विजयी भएका हुन् ।
एकलौटी बहुमत रहेको प्रदेश १ मा एमालेका अरु थप तीन जनाले पनि दावी गरिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्की, राजेन्द्र राई, जीवन घिमिरे पनि अगाडि सरेका हुन् । अरु उम्मेदवार कमजोर भएकोले आचार्य र राईका बीचमा नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । प्रदेश १ संयोजक समेत रहेका आचार्य सुनसरी–१ ‘ख’ बाट विजयी भएका हुन् । प्रदेशका सह–संयोजक राई भोजपुर ‘ख’ बाट विजयी भएका सांसद हुन् ।
शेरधन राईले बिराटनगरमा पत्रकार सम्मेलनगरि मुख्यमन्त्रीको दावी गरेको केही समयमा नै माधव कुमार नेपाल समुहका जीवन घिमिरे पनि मुख्य मन्त्रीको दावी गरे । लाभको पदमा अहिलेसम्म नपुगेकोले त्यो अवसर आफूले पाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । अध्यक्ष केपी ओलीको समर्थन रहेकाले राई आफ्नो पक्षमा निर्णय हुनेमा पक्का थिए ।
स्थायी समितिले सर्वसम्मत नभए निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रदेशमा चुनाव भए आचार्य राई भन्दा बलियो देखिन्छन् । आचार्यले आफु पदीय हिसावले पनि राई भन्दा माथि रहेको र समर्थन पनि आफ्नो पक्षमा रहेको बताए । ‘कुनै पनि हिसाबमा म नै मुख्यमन्त्रीको लागि योग्य व्यक्ति हुँ’ उने भने ‘मेरो विकल्प अरु हुनै सक्दैनन् । शेरधनजीले अहिले दावी गर्नु भएको हो । समर्थन मलाई नै हुन्छ ।’ पूर्वपर्यटन मन्त्री समेत रहेका उनले पार्टीको सिनियर सदस्य भएकाले पार्टीले आफुलाई मुख्य मन्त्री बनाउने बताए ।
राईले पनि आफु नै मुख्य मन्त्री बन्ने दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हुने लगभग टुंगो भसकेको छ । मुख्यमन्त्री बन्नबाट अब मलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अझै पनि आकांक्षीबीचमा सहमति खोजिने र सहमति हुन नसके निर्वाचनबाट चयन गरिने बताए । प्रदेशमा आचार्यको बहुमत भएकाले उनको बलियो सम्भावना छ । दुईजना सहमतिमा आए मुख्य मन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएर निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेको ३५ दिनभित्र मुख्य मन्त्री नियुक्त गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।